Maitiro ekugadzirisa iyo iOS 13 Kumba kunyorera | IPhone nhau
Maitiro ekugadzirisa iyo iOS 13 Kumba app
Iyo iOS Home app iri kuramba ichizadza uye ichishanda, iyi ndiyo nzira iyo Apple inotarisira kuti isu tipinde muvhisi yekutenga zvigadzirwa zvemumba zvakangwara, kunyanya izvo zvine chisimbiso che: Inoenderana neKeKKKit kubva pane izvo zvaidiwa neKEA, Philips Que uye LIFX. Nekudaro, kana isu tatove nekugona nhamba yakanaka yemidziyo yakabatana mumba, iko Kumba kunyorera kunogona kuve Chaos Chaiwo. Nhasi ndinoda kukudzidzisa zvese zvaunoda kuti uzive nezvekushandisa kweIOS Kumba uye nokudaro ukwanise kugadzirisa zvifananidzo, zvidhori nemagariro, ngatiende ikoko nedzidziso iyi.
1 Maitiro ekumisikidza, kudzima uye kushandisa edu eKiKit zvishandiso
2 Maitiro ekuita yako Imba neKeKKit
3 Maitiro ekugadzira uye kugadzirisa makamuri
4 Maitiro Ekugadzirisa Ese HomeKit Midziyo Kumba
5 Maitiro ekugadzira uye kushandisa "Environments" uye "Automation" muImba application
Maitiro ekumisikidza, kudzima uye kushandisa edu eKiKit zvishandiso
Izvo hazvizotore iwe kuti utore nguva kuti uzive kuti Casa yeIOS haina Widget, ndeimwe yemashoma emuno mafomu asina mabhureki anonakidza akadaro. Nekudaro, izvi imhaka yekuti, muchokwadi, Imba ine chiratidzo chinowanikwa muDhijitari Center, kuiwedzera uye kuvhura iyo kudonhedza pasi mapfupi ekumba pasina kupinda muchirongwa isu tinongofanirwa kuenda kuZvirongwa> Kudzora Center> Gadzirisa zvidzoreso uye pano tichawedzera iyo Icon yekumba.
Kubva ipapo Kudonhedza pasi kwemidziyo yedu yaunofarira kuchavhura, kusvika pa9 kuti ive yakanyanya kutaurwa. Kuvadzvinyirira isu tinovadzima nekuvadzima, asi isu tinoita a Yakareba kudhinda 3D Kubata kunovhura akawedzera masimba izvo zvinotibvumidza isu kusarudza mavara uye kusimba. Pano isu tine chiratidzo checogwheel pazasi iyo kana isu tikachimanikidza inotitora isu kuenda kumisara yeiyo mudziyo kuti ukwanise kuitazve zita uye kuigadzirisa. Nenzira imwecheteyo kubva kuControl Center kana tikabaya paImba icon mune inodonha, zvinotitora isu kuenda kuchikumbiro. mune yakazara vhezheni yayo.
Maitiro ekuita yako Imba neKeKKit
Kana tangovhura iyo iOS Kumba kunyorera isu tine iyo "edit" bhatani iri kumusoro kurudyi kwescreen. Kana tikachipa uye tinya pazita reimba yedu, tabu nyowani ichavhura iyo ichatibvumidza kuti tigadzirise hunhu hwese hwe "Imba" yedu muIOS, zvisinei, isu tinofanirwa kuyeuka kuti tinogona kudzvanya pa «Wedzera imba», sezvo tichigona kudzora dzimba zhinji sekuda kwedu. Mune ino tebhu yekugadzirisa isu tinokwanisa kuita ese anotevera maitiro ekugadzirisa:
Tumidza zita Imba ndokuisa iya yatiri kuda
Koka vashandisi veIOS kuti vatonge imba yedu kubva kune yako iOS kifaa
Manage kupinda kune maspika uye terevhizheni kune vanhu vanobatana neWiFi pamwe nephasiwedi kumatauri edu nematerevhizheni
Manage zvishongedzo nzvimbo nekubatanidza mabhiriji mune imwe neimwe imba
Kusarudza kumashure kweimba kusarudza pikicha kubva kuraibhurari yedu kana kuitora zvakananga
Wedzera zvinyorwa kuimba kuitira kuti munhu wese akwanise kuaverenga kana achiwana
Delete Imba, uye saka zvese zvishandiso zveKeKKit zvakabatana zvichave zvisina kubatana
Maitiro ekugadzira uye kugadzirisa makamuri
Sezvineiwo, isu tine zvishandiso zveK HomeKit zvakarairwa nenzvimbo dzekugara, saka tichazokwanisa kuzvibata nekukurumidza uye kuziva nguva dzese kwadziri. Kuti uite izvi, tinya pane "Makamuri" tebhu, uye usati wabatanidza chero chigadzirwa cheKeKKit, tinya pa "+" kugadzira makamuri. Kana tangovagadzira ivo tinokwanisa kudzvanya pane bhatani re «Hora» kuti uzvigadzirise rimwe nerimwe, ndinokurudzira kuti utore pikicha yeimba yega yega woishandisa nechekumashure kuti uone nekukurumidza. Kana tikadzvanya pa «Rongedza» uye sarudza kamuri isu patinogona:
Sarudza zita kongiri yekamuri rakasarudzwa
Govera nzvimbo (seti yemakamuri) kuitira kana tikasiyanisa pasi kana zvikamu zveimba
Sarudza chikwama kana kutora pikicha kuti ugozvipa
Delete imba yega yega
Kana isu tikabatanidza mudziyo weKeKeKit, inotibvunza kana isu tichida kuigovera kune imwe nzvimbo kamuri. Izvi Tinogona kuichinja pese patinoda, isu tinongofanirwa kumanikidza «Gadzirisa», sarudza chishandiso uye mukati me «Kamuri» sarudzo sarudza iyo yatiri kuda. Ndiko kureruka kwatingaita kugovera izvo zvatinoda kukamuri yega yega uye nekuzviita zvakarongedzwa zvakakwana kuitira kuti isu nemunhu wese anokwanisa kuwana tizvizive muKushandisa Kumba.
Maitiro Ekugadzirisa Ese HomeKit Midziyo Kumba
Zvingave sei neimwe nzira, maikoni uye kugadzirisa zvinotora zvakakosha mukushandisa senge Kumba. Nokutadza mudziyo wega wega unowana zita uye chiratidzo, asi isu tichakwanisa kugadzirisa izvi kana taona zvakakodzera uye zvakare zvakareruka. Kuti uite izvi zvakapusa isu tinofanirwa kubaya mukati meKushandisa Kumba pa "Gadzirisa" uye sarudza chishandiso, ipapo yemenyu yekugadzirisa ichavhura kwatinogona:
Ipa zita zvakare iyo yatinoda
Sarudza kamuri kwainoshanda
Sanganisira iyo mu «Favorites»: Izvi zvichaita kuti zvioneke muDare Rekudzora uye mutabhu yepamba yeImba application
Sarudza nharaunda yainoshanda
Chinja icon yekuwedzera: Kuti uite izvi, tinya padyo nezita pane icon uye ichavhura kudonhedza pasi nezvose zvinogona kusarudzwa zvinoenderana nerudzi rwechigadzirwa
Zvishongedzo zveboka: Zvekuti vanoverengeka vanobatidza uye kudzima panguva imwe chete kana tikazviita mune chimwe chazvo
Aya ndiwo makuru maficha kuti isu tinokwanisa kugadzirisa mune yeIOS Kumba kunyorera kuti tione zvishandiso zvedu nekukurumidza.
Maitiro ekugadzira uye kushandisa "Environments" uye "Automation" muImba application
Pekupedzisira isu tichaenda kusiyanisa pakati pe «otomatiki» uye «Mamiriro enzvimbo» Kumba neKeKeKit:
Mamiriro ezvinhu: Akateedzana etsika kumisikidza uye kusagadzikana kwatinogadzira kuitira kuti zvishandiso zvimhanye zvinoenderana nezvatinoda, semuenzaniso, tinogona kugadzira nharaunda yemarambi akaderera, kuwanda kwevhoriyamu uye neruvara rwemavara kuti tione bhaisikopo.
Otomatiki: Muchikamu chino tinokwanisa kungoisa marongero kuitira kuti pane dzimwe nguva mamwe mabasa atinoda aite, semuenzaniso, kuti na07: 00 AM zuva rega rega mwenje unobatidza zvishoma kutimutsa.
Tinogona gadzirisa michina zvinoenderana ne:
Kana mumwe munhu akasvika kana kusiya nekuisa geopositioning mushandisi
Zvinoenderana nenguva chaiyo yezuva
Zvichienderana nekuti isu tinodzima kana kudzima chaicho chinongedzo (Semuenzaniso, kana tikabatidza girobhu rekicheni, girobhu yekuwachira inozovhurawo)
Zvichienderana nekuti chero ma sensors anoona sei kuisirwa
Kana iwe uine zvako zvemanomano kana chero mibvunzo, usazeze kumira neteregiramu yedu chiteshi kana kutisiira izvo zvaunoda zvakanyorwa mubhokisi remashoko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzirisa iyo iOS 13 Kumba app
Mumwe mushumo unovimbisa kuti iyo iPhone 11 ichasanganisira iyo USB-C charger mubhokisi
Mazhinji tambo dzeApple Watch hadzipo muzvitoro zvichisimbisa kuvandudzwa kweApple Watch